self-ကော်မြင့်မား Polymer အမျိုးအစားကတ္တရာစေးရေစိုခံအမြှေးပါး - တရုတ် Xinle Hongtai waterproof
self-ကော်မြင့်မား Polymer အမျိုးအစားကတ္တရာစေးရေစိုခံအမြှေးပါး
ပင်မအလုပ်ရုံ: 60x (12-15) က x (6-8)
အထူ: 3mm, 4mm
width: 1 မိန
လျှောက်လွှာ: ခေါင်မိုး, မြေအောက်ရထား, မြေအောက်ခန်း, မြို့ရိုး, ရေကူးကန်, etc
Surface ကပစ္စည်း: PE ရုပ်ရှင်, လူမီနီယမ်သတ္တုပါး, သဲ, Schist အလွှာ, etc
အနိမ့်အပူချိန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: -30 ° C, -20 ကို C °
မြင့်မားသောအပူချိန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: 70 ° C မှ
သစ်သားအမှုသို့မဟုတ် pallet / PS: ကျနော်တို့သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်များအတွက်လွတ်လပ်သောအခွင့်အရေးများရှိသည်။
10 ရက် 30% ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်
self-ကော်မြင့်မား Polymer အမျိုးအစား ကတ္တရာစေးရေစိုခံ အမြှေးပါး
polyester ကိုယ်ပိုင်ကော်ပြင်ဆင်ထားသော Bituminous ရေစိုခံအမြှေးပါး သည်၎င်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်း, SBS, SBR နှင့်၎င်း၏အားဖြည့်အဖြစ်က၎င်း၏အထူးပြုနှင့် polyester အဖြစ်စေး tackifying အဖြစ်ကတ္တရာစေးပါဝင်ပါသည်။ ၎င်း၏အထက်မျက်နှာပြင် polyethylene (PE) ဇာတ်ကားဆု, သဲသို့မဟုတ် strippable ဆီလီကွန်ရုပ်ရှင်နှင့်ဖုံးလွှမ်းနှင့်၎င်း၏မျက်နှာပြင်အောက်တွင်အုပ်စုခွဲဖြန့်ချိရုပ်ရှင်နှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်ဖြစ်ပါတယ်။
1. Tackifying စေးမြှေးပါးတင်းကျပ်စွာခြေရင်းမျက်နှာပြင်ကပ်စေနိုင်သည့်အားကြီးသောကော်ခွန်အားနှင့်အမြှေးပါးသည်။
2. အဆိုပါအမြှေးပါးကောင်းသောထိုးဖေါက်ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်, ယင်း၏အားဖြည့်အဖြစ် polyester နှင့်အတူခံနိုင်ရည်နှင့်ပွန်းစားခြင်းခံနိုင်ရည်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆုတ်ဖဲ့။
5. အမြှေးပါးအမြင့်ဆုံးဆန့ခွန်အားနှင့်ကောင်းသော elongated ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ပင်ခြေရင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အက်ကြောင်းနှင့်ပုံပျက်သော၏ဖြစ်ရပ်အတွက်၎င်း၏အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ပါတယ်။
7. Excellent ကဓာတုခုခံ, ချေးခုခံခြင်းနှင့်ရာသီဥတုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အပျက်အစီးအထိရှင်းလင်း, ချွန်ထက်ဖုရှိပါတယ်လျှင်, အစိုဓာတ်ကိုခွင့်ပြုပါသည်ရေမရှိဘဲတည်ဆောက်စေခြင်းငှါပယ်မြင့်။
ကပ်လျက်စာရွက်အမြှေးပါးလမ်းခင်းတဲ့အခါ, မြေအောက်ခန်းအပေါ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုန်နှင့်အတူရေစိုခံစာရွက်အမြှေးပါးကိုကျော်ပြန့်နှံ့။ မည်သည့်ကွာဟချက်မပါဘဲထပ်စောင့်ရှောက်ဖို့အစွန်း alignment ကိုထပ်အာရုံစိုက်။
မည်, ပေါ်လီမာကိုဆင်းမျက်နှာပြင်၏ကို Double-ခြမ်း Self-ကော်၏အထီးကျန်ထားခြင်းအမြှေးပါးကိုချွတ်ဆုတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအထီးကျန်ရုပ်ရှင်အပြီးနောက်တဖန်တိပ်ကိုလှိမ့် Remove, ထိုကွိုင်ချိတ်ဆက်: (1) ရေစိုခံစာရွက်အမြှေးပါးထပ် လာသောအခါတိပ်သင့်လျော်သောအပူမှလိုအပ်သောသည်, တိပ်ခွေပေါ် paste လုပ်ပါ binding ၏အားကြီးသောအရူးအမူးကို ယူ. , အကျိုးသက်ရောက်မှု paste လျှောက်ထားရမည်ခြောက်သွေ့သောအခြေအနေများမှအစွမ်းထက်ပို ideal.more ဖြစ်ပါတယ်။
(2) ပူးတွဲရေစိုခံစာရွက်အမြှေးပါးထပ်: ရင်ခွင်အပြီးဂေါ်ပြားကော်ချောင်းကိုတိပ်, ဒီချဉ်းကပ်မှုမိုးရေဖြစ်စေခြင်းငှါ၎င်းရေစိုခံအလွှာသက်ဆိုင်သည်။
(3) Butt ပူးတွဲရေစိုခံစာရွက်အမြှေးပါး ကွိုင် binding ပစ္စည်း ocking DNM ကွိုင်ချမှတ်, coil ချွတ်သို့ဖြတ်ခြင်းနှင့်ကော်မကျြနှာကိုဖွင့်ထားပါ, အထီးကျန်အမြှေးပါးပြီးနောက်မျက်နှာပြင်ကိုချွတ်သိရပါသည်, ထိုကွိုင်၏အထက်တင်းပါး paste နှင့် binding ၏အားကြီးသောအရူးအမူး။ ယင်းချဉ်းကပ်မှုမိုးရေဖြစ်စေခြင်းငှါ၎င်းရေစိုခံအလွှာများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်တယ်, ဒါလွှတ်ပေးရန်ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
DNM လိပ် yin နှင့်ယန်၏ထောင့်နှင့် node ကိုအပိုဆောင်းအလွှာဆောက်လုပ်ရေးမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဖွဲ့စည်းပုံ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် node ကိုပြည့်စုံနှင့်စစ်ဆေးမှုများအပြောင်းအလဲနဲ့၏တင်းကျပ်စွာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ကြီးမားသောကွိုင်ဆိုင်ငါးပိပြီးစီး: 4) သဘောတူညီချက်တံဆိပ်မခတ်နှင့် , မြေအောက်ခန်း, မူလီ, ရေနုတ်မြောင်းနှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို၏ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပုံသည်ခေါင်းရင်းရည်မှန်း, ထို့နောက်သဘောတူညီမှုတံဆိပ်ခတ်ထားမှရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်းတိုက်, ကော်တိပ်နှင့်အတူ Consolidated ချမှတ်သင့်ပါတယ်။
6) နောက်ပိုင်းဆောက်လုပ်ရေး: ရေစိုခံအလွှာ၏ဆောက်လုပ်ရေးဖြည့်စွက်ရန်, ကွန်ကရစ် binding.d အထီးကျန်မှုတွေအလွှာအားဖြည့်နိုင် - အမြှေးပါးတင်သောပြီးနောက်, ရေစိုခံအလွှာဒီဇိုင်းအညီကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အထီးကျန်အလွှာတည်ဆောက်ရန်။
1. လသာဆောင်, ရေချိုးခန်း, မီးဖိုချောင်
2. ဥမင်လိုဏ်လမ်းများ, စက်မှုခေါင်မိုး
3. ပြားနှင့် sloped ခေါင်မိုး
4. မြေအောက်ခန်း, ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်ဆက်ထိန်းထားနံရံများ
5. ဥယျာဉ်, Bridges
သိုလှောင်ခြင်း & တင်ပို့ခြင်း
ခိုင်မာတဲ့သစ်သား pallet နှင့်အတူထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် slant ၏အမှု၌ကျုံ့ရုပ်ရှင်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်း
ကျနော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုစလှေတျတျောတိုင်းစုံစမ်းရေးကော်မရှင်တန်ဖိုးထားနှင့်တစ်ဦးအမြန်အပြိုင်အဆိုင်ကမ်းလှမ်းမှုအာမခံပါသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့အားအမိန့်လျှင်, ငါတို့သည်အရည်အသွေးကတိပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရေစိုခံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော်ရှိသည်ကြောင့်, ရှိသမျှကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အမျိုးသားရေးစံနှုန်းညီ! ကျနော်တို့ဟာအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနှင့်တစ်ဦး prompt ကိုပေးပို့ကတိပေးနိုငျပါသညျ! သင့်ရဲ့အမိန့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကြိုဆိုပါ!
ယခင်: စျေးပေါစျေးကိုယ်ပိုင်ကော် Polymer အမျိုးအစားကတ္တရာစေးရေစိုခံခေါင်မိုးအမြှေးပါး
Bituminous waterproof ထုတ်ကုန်များ
Flat ခေါင်မိုး Watertight အမြှေးပါး
self-ကော်ပေါ်လီမာကတ္တရာ Waterpro ပြုပြင်ထားသော ...
1.5mm-5mm SBS ရဲ့ elastomeric ကတ္တရာ memb ပြင်ဆင်ထားသော ...
1.5mm-5mm SBS ရဲ့ Wate elastomeric ကတ္တရာစေးပြင်ဆင်ထားသော ...
စျေးပေါစျေးကိုယ်ပိုင်ကော် Polymer အမျိုးအစားကတ္တရာစေးရေ ...
w ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကတ္တရာသုံးရေစိုခံစာရွက်ပစ္စည်း / ...